Hotel Hyatt Place Tegucigalpa: Voamarina voalohany tany Amerika afovoany
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Hotel Hyatt Place Tegucigalpa: Voamarina voalohany tany Amerika afovoany
Ny fanamarinana Green Globe dia rehareha amin'ny fanambarana ny fanamarinana voalohany ny Hotel Hyatt Place Tegucigalpa, Honduras. Ity fanekena ity no voalohany ho an'ny marika Hyatt Place any Honduras sy any Amerika Afovoany, izay amboariny amina vondrona voafantina misy firenena amerikana latina fito manana ny mari-pahaizana ambony indrindra amin'ny fizahan-tany fizahan-tany maharitra sy fitetezana izao tontolo izao.
Green Globe no programa fanamarinana manerantany ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ny fenitra fanombanana dia ampiharina amin'ny alàlan'ny fisafidianana mari-pamantarana fanarahan-dalàna mihoatra ny 380 amin'ny fepetra fanamarinana 44 an'ny tsirairay.
“Tena afa-po izahay noho io fankatoavana io. 10 volana ny asa mafy mba hahafeno ny fepetra takiana, saingy miaraka amin'ny tanjona mazava fa io zava-bita io dia miteraka fenitra ambonimbony kokoa amin'ny sehatry ny hôtely any amin'ny faritra, izay midika ho andraikitra lehibe koa amin'ny fanomezana fiofanana tsy tapaka ho an'ny mponina sy ny vahiny. Mandritra izany fotoana izany dia mamela ny famantarana ireo olana eo an-toerana atrehin'ireo orinasa sy vondrom-piarahamonina iasantsika, "hoy i Rafael Corea, Tale Jeneralin'ny Hyatt Place Tegucigalpa.
Hatrany am-piandohana, ny hotely dia noforonina tamina drafitra maharitra momba ny famatsian-drano mafana miaraka amin'ny angovo azo havaozina. "Amin'ity dingana ity, ny tanjona dia ny hampihenana ny fanjifana rano, angovo ary lasantsy amin'ny 3%," hoy i Corea.
Ny fampiharana ny politikam-panamarinana ao amin'ny Hyatt Place Tegucigalpa dia nihaona tamin'ny andiana fanamby, ho an'ny mpampiasa, ny mpiasa ary ny vahiny, satria nilaina ny miasa mba hampiroboroboana ny fomba fanao izay tsy mahazatra amin'ny toerana eo an-toerana. Ny fianarana misaraka plastika, vera, taratasy ary aliminioma dia nitaky fiofanana sy fanaraha-maso fanampiny, hany ka lasa fahazarana sy ampahany amin'ny kolontsaina ny fanodinana.
Ny iray amin'ireo fanoloran-tena hanatsara ny vidin'ny asa dia ny programa maitso fanadiovana ny efitrano fanadiovana, hatramin'ny 25% amin'ny fampihenana ny rano sy ny fampiasana simika.
Fandaharam-potoana mahomby iray hafa dia ny fampiasana angovo mahomby izay miteraka fahombiazana tsara kokoa amin'ny ankapobeny raha oharina amin'ireo hotely mpifaninana. Ohatra, ny fanjifana amin'ny hotely dia 72 KwH isam-bolana, raha ny trano fandraisam-bahiny hafa manana toetra mitovy amin'izany kosa dia mitentina 120 KwH isam-bolana.
Izany dia nohazavaina tamin'ny fametrahana ny rafitra rano mafana miaraka amin'ny fahaizan'ny mivezivezy tanteraka, izay nahitana ny fihenan'ny fisotroana rano tamin'ny alàlan'ny fitahirizana azy amin'ny hafanana ao anaty fantsona, noho izany dia tsy ilaina intsony ny avelan'ny vahiny hihazakazaka hahazoana rano mafana. Vokatr'izany, ny fihenan'ny fanjifana angovo dia namboarina, satria nihena ihany koa ny enta-mavesatra amin'ny rafitra pumping.
Hyatt Place Tegucigalpa dia mikasa ihany koa ny hametraka ny ezaka maharitra amin'ny asa fanabeazana sy ny fanadiovana ny fiaraha-monina, manohana ny Friends of La Tigra Foundation (Amitigra), orinasa iray tsy mitady tombony amin'ny fitantanana sy fiarovana ny La Tigra National Park, ao amin'ny Francisco Morazán faritra. Ao amin'ny sehatry ny andraikitra ara-tsosialy ara-tsosialy, ny drafitra amin'ny taona ho avy dia hahita fiaraha-miasa amin'ny fototra Educate2, hamindra ireo mpilatsaka an-tsitrapo ary hampiofana ny tanora avy amin'ireo vohitra amin'ity fototra ity amin'ny fampiharana hotely.
“Mihoatra ny tombo-kase, ny fanamarinana Green Globe dia fanovana ny modus operandi. Mianatra manao zavatra tsara kokoa izy, mihoatra ny fenitry ny tsena ary mitarika ho mpitarika tsara eo amin'ny fiarahamonina misy ny hotely, "hoy i José Armando Gálvez, mpitantana maharitra ny Latam Hotel Corporation, orinasam-pampiasam-bola izay manana tetik'asa fandraisam-bahiny fito eo am-pivoarana amin'ny maro tanànan'i Guatemala, El Salvador, Honduras ary Nikaragua, izay mikasa ny hiditra tsikelikely hahazoana io mari-pahaizana io.
“Hyatt Place Tegucigalpa no trano fandraisam-bahiny voalohany voamarina amin'ny Green Globe any Honduras ary manatevin-daharana ireo mpitarika amin'ny fitantanana fandraisam-bahiny maharitra any Amerika Afovoany. Nandritra ny 20 taona mahery, Green Globe no fenitra ambony indrindra iraisam-pirenena momba ny faharetana amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Rehefa manomboka ny taona vaovao isika dia faly fa ny Hyatt Place Tegucigalpa dia manatevin-daharana ny antokon'ireo fananana Hyatt voamarina ao amin'ny toerana iraisam-pirenena sivy, "hoy i Guido Bauer, CEO an'ny Green Globe.
Green Globe dia rafitra maharitra maharitra miorina amin'ny fenitra eken'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny asa maharitra sy ny fitantanana ny orinasan-fizahan-tany sy fizahan-tany. Miasa eo ambanin'ny fahazoan-dàlana manerantany, Green Globe dia monina any California, Etazonia ary manana firenena 83 mahery. Green Globe dia mpikambana iray ao amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Raha mila fanazavana, azafady kitiho eto.
USA: Mitohy ny lanitra misokatra ary inona ny fihetsik'i US Travel
Mpahandro sakafo malaza ao amin'ny Hotelia Prague, Romania, Jean-Paul Georges Manzac, dia namorona menio sakafo super ho an'ny Fetiben'ny Grand Restaurant any Prague fanao isan-taona